मेमा ओसाका मौसम! तापमान, वर्षा, कपडा - Best of Japan
यदि तपाईं मेमा ओसाका भ्रमण गर्नुहुन्छ भने कस्तो खालको लुगा लगाउनु पर्छ? यस पृष्ठमा, म मौसम, वर्षाको मात्रा र मे महिनाको लागि उत्तम लुगाहरूबारे छलफल गर्नेछु। ओसाका मेमा साथै होन्शुका अन्य ठूला शहरहरू जस्तै टोकियोमा धेरै सहज छन्। तपाइँ निश्चय पनि आफ्नो यात्राको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
तल मे टोकियो र होक्काइडोको मौसम बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ।
ओसाकामा मेमा मौसम (अवलोकन)
ओसाका मौसमको सुरूवात मे (२०१ early) मा
ओसाका मौसम मे (२०१ 2018) को बिचमा
मे महिनाको अन्तमा ओसाका मौसम (२०१))
ग्राफ: ओसाकामा मेमा तापमान परिवर्तन
मेमा ओसाकामा अधिकतम तापमान २० डिग्री सेल्सियस भन्दा न्यानो रहन्छ। प्रत्येक पटक यो वर्षा हुन्छ, रूखहरू र फूलहरू बढ्छन् र उनीहरूको सुन्दर हरियो रंग देखाउँदछ। मानिसहरू अक्सर ओसाका कासल पार्क जस्ता ठूला पार्कहरूको माध्यमबाट घुम्छन्।
सामान्यतया: तपाईलाई न्यानो कपडाको आवश्यक पर्दैन जस्तै घामको दिनमा कार्डिगनहरू। जहाँसम्म, यदि तपाइँ सजिलै चिसो हुनुभयो भने, यो केसमा ल्याउँदा एक राम्रो विचार हो।
व्यापार मा, हामी जापान मा मे को अन्त्य सम्म सूट लगाउँछौं। हामी प्राय: जून देखि सेप्टेम्बरको अन्तमा सूट ज्याकेट लगाउँदैनौं। यद्यपि अभ्यास व्यवसायको प्रकारमा फरक हुन्छ।
वर्षाको दिनमा तापमान २० डिग्री भन्दा बढी नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा तयारीको लागि, तपाईंले छोटो बाहुला बाहेक अन्य लुगा पनि तयार गर्नुपर्दछ।
मे महिनाको अन्तमा वर्षा र बादल दिन बढ्नेछ। जापानमा प्रत्येक वर्ष जुन महिनामा वर्षायाम हुन्छ। वसन्त summerतु देखि ग्रीष्म transitionतुको संक्रमण नजिकै आउँदैछ। तसर्थ, यदि तपाईं मे महिनाको अन्तमा ओसाकामा आउनुभयो भने, तपाईंले वर्षाको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
तल जापान मौसम संघ द्वारा जारी गरिएको मे २०१ for को लागि ओसाकाको मौसम विज्ञान डेटा हो। कृपया आवश्यक अनुसार सन्दर्भ गर्नुहोस्।
न्यूनतम वायु तापमान 10.3
कुल वर्षा 85.5 मिमी
मे,, २०१:: ओसाका कासल, ओसाका, जापानमा प्रवेश गर्न पुरानो ऐतिहासिक पुलमा हिँडिरहेका दुई विदेशी पर्यटकहरू = शटरस्टक
अप्रिल २ th को आसपासदेखि लगभग May मे सम्म, "गोल्डेन वीक" जापानमा देखा पर्दछ, जुन धेरै छुट्टिहरू प्रस्तुत गर्दछ। त्यसोभए मेको सुरुमा ओसाका प्रमुख पर्यटन स्थलहरू एकदमै भीडले भरिएका छन्। होटलहरू यस समयमा महँगो पनि छन्।
यस समयमा धेरै यात्रीहरू छोटो आस्तीनको शर्ट लगाएर हिंडिरहेका छन्। जे होस्, बिहान र साँझ राम्रो छ। भवनहरू अब शीत वातानुकूलित चलिरहेका छन्। म यी समयमा एक ज्याकेट वा कार्डिगन सिफारिश गर्दछु।
मेको सुरूमा ओसाकामा सूर्योदय समय 5:०05 जति हुन्छ र सूर्यास्त समय १ 18::46 वरपर हुन्छ।
न्यूनतम वायु तापमान 9.7
कुल वर्षा 102.5 मिमी
राम्रो मौसम अनुपात 55%
मे १,, २०१:: वर्षाको दिनमा Shinsaibashi किनमेल क्षेत्र, ओसाका, जापान = शटरस्टक
अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूका लागि, मलाई लाग्छ मध्य-मे ओसाकामा यात्रा गर्न उत्तम समय हो। यो किनभने जापानी मानिसहरू यस समयमा धेरै यात्रा गर्दैनन् किनकि त्यहाँ कुनै छुट्टीहरू छैनन्। पर्यटन स्थलहरू ताजा हरियो प्रकृतिको साथ चम्किरहेका छन्। तापक्रम सहज छ र पानी पर्दैन। यदि यो वर्षा छ भने, यो चित्र मा माथि देखाइन्छ जस्तै हार्ड गिर छैन।
मध्य मेमा, ओसाकामा सूर्योदय समय करीव :4::56 हुन्छ र सूर्यास्त समय १ 18::54 हुन्छ।
अधिकतम तापमान (सेल्सियस) 29.8
न्यूनतम वायु तापमान 15.7
कुल वर्षा 42.5 मिमी
राम्रो मौसम अनुपात 41%
मे २ 23 २०१ 2019 - डोटनबोरी धेरै पर्यटकहरू विदेश विदेश, ओसाका, जापान = शटरस्टकबाट आएका छन्
मेको पछिल्लो दिन, ओसाकामा दिनको अधिकतम तापमान २ 25 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढि जान्छ। यदि तपाईं दिनमा दिनमा टुरिस्ट स्पटको वरिपरि हिंड्नुहुन्छ भने तपाईं पसिना बहाउन सक्नुहुन्छ। वर्षा .तु नजिकै आउँदैछ तर त्यहाँ धेरै वर्षा दिवसहरू छैनन्।
मेको अन्तमा, ओसाकामा सूर्योदय समय करिब :4: around and र सूर्यास्त समय १ 49: १ around तिर हो।